Samsung Gear Sport, waxaan ku tijaabinay IFA 2017 | Androidsis
Gudaha IFA 2017 oo lagu qabtay magaalada Berlin Samsung ayaa layaabay soo bandhigida Samsung Gear Sport, a u fiirso si toos ah ugu jiheysan dhanka astaanta cayaaraha taasina waxay leedahay muuqaalo aad u xiiso badan.
Hadda waxaan kuu keenaynaa kuweenna Dareenka ugu horreeya ee Isbaanishka ka dib tijaabinta Samsung Gear Sport, Saacadda cusub ee ka timid soosaaraha Kuuriya oo u timid inay la tartanto taxane taxane ah iyo shaqeyn taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee la tixgelin karo
2 Astaamaha farsamada ee Samsung Gear Sport
Sida laga yaabo inaad ku aragtay fiidiyowga, isboortiga Samsung Gear waa moodel sii socosho ah iyo taasi waxay haysaa naqshadeynta moodooyinka hore, in kasta oo ay jiraan nuucyo taxane ah oo si fiican ugu habboon.
Qodobka ugu horeeya ee xusida mudan waxaan ku aragnay wajiga saacada, oo hada khafiifsan (11.6 mm) marka lagu daro yareynta culeyska ilaa Gram 50 taas oo ka dhigaysa mid si dhib yar looga ogaan karo gacanta, wax ay ciyaartoyda ugu badani ku qanacsan yihiin.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee khilaafku ka jiraa waa yaraynta cabbirka shaashadda taas wuxuu gaaraa 1.2 inji isagoo 0.1 inji ka yar qaabkii hore. Isbeddel khiyaano ah oo aan la dareemi karin inta lagu jiro isticmaalka laakiin ka dhigaya mid aad u deggan oo u oggolaanaya dadka isticmaala curcurka yar inay isticmaalaan saacadda dhib la'aan
ka xargaha laysku beddeli karo Waxay noqdaan 20 milimitir, wax aniga shakhsiyan aan u qadariyo maadama xargaha caadiga ah ugu dambeyn la isticmaali karo Horusocod taxane ah oo Gear Sport ka dhigaya mid smartwatch aad u soo jiidasho leh. Intaa waxaa sii dheer, xaqiiqda ah in nashqadeynteeda aysan aheyn mid isboorti xad dhaaf ah ayaa u oggolaaneysa in loo isticmaalo deegaan kasta.
Astaamaha farsamada ee Samsung Gear Sport
Tusaale Gear Sport
Nidaamka hawlgalka Tizen
Screen 1.2 inji Wareeg ah Super AMOLED oo leh xalka 360 x 360 - 302 ppi - Midab Buuxda Had iyo Jeer Muujinta- Corning Gorilla Glass 3
PA Dual Core oo ah 1.0 GHz
Cabbirada X x 42.9 44.6 11.6 mm
Peso 50 garaam (jijin la'aan)
Kaydinta Gudaha 4 GB
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 4.2 + Wi-Fi b / g / n + NFC + GPS / GLONASS / Beidou
Sensors Accelerometer + Gyroscope + Barometer + HRM + Sensor Iftiinka Dareemaha
Batariga 300 Mah
Nidaamka lacag-bixinta wireless
U hoggaansanaanta Samsung Galaxy oo wata Android 4.3 ama ka sareeya + Inta kale ee casriga ah ee Android oo wata Android 4.4 ama ka sareeya + iPhone 7 - 7 Plus - 6s - 6s Plus - SE - 5 oo socda iOS 9.0 ama ka sareeya
Midabada Nego - Buluug
Ka dib markaan tijaabiyay sheyga waa inaan dhahaa shaqada ay samaysay Samsung runti way wanaagsan tahay. Waxaan la yaabay awoodda aan u duubi karo kalfadhiyada dabaasha iyada oo ay ugu wacan tahay heshiiska u dhexeeya Samsung iyo Speedo. Sida iska cad anigu ma aanan awoodin inaan tijaabiyo shaqadan laakiin runtii wey fiicantahay.
Samsung waxay sii wadaa inay ku sharraxdo Tizen sida interface, lakab horeyba u ahaa waxaan horey ugu tijaabinay Samsung Gear S3 runtiina si fiican ayey u shaqeysaa.
Qabashadal Samsung Gear Sport wuxuu hayaa nuxurka saacadaha soo saaraha mahadsanid taajka wareega ee noo ogolaanaya inaan si deg deg ah oo raaxo leh ugu gudubno isdhexgalka. Xalka aniga ila muuqda inuu yahay mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee looga hortagi karo in saacadda laga buuxiyo faraha oo ay tahay in soo saarayaasha kale ay billaabaan adeegsiga.
Qalabka Gear Sport ee cusub ayaan kula socon karnaa garaaca wadnaha, tirinta tillaabooyinka, dejinta yoolalka caafimaadka iyo kuwa kale oo ku mahadsan barnaamijka S Health, nidaam deegaan oo dhammaystiran oo bixiya fursado badan oo la yaab leh.
Farsamo ahaan majiraan isbadalo badan marka loo eego jiilkii hore, laakiin arinta ku saabsan ismaamulka ayaa noqon doona mid aad u xiiso badan tan iyo kuwa 300 mAh waxay balan qaadayaan 3 ama 4 maalmood oo la isticmaalo, wax aan horay ugu aragnay Gear S3 oo naga tagay dareen aad u wanaagsan.
Hadda waxaan u baahanahay soo-saaraha inuu noo soo diro qeyb tijaabo ah si aan u aragno sida ay u sameyneyso Samsung Gear Sport, laakiin aragtiyadii ugu horreeyay runti way fiicnaayeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Gear Sport, waxaan ku tijaabinay IFA 2017
Hector Aldo Herrera - Veleizan dijo
Waxay u egtahay wax fool xun, sawirkan ...
Jawaab Hector Aldo Herrera - Veleizán
SanDisk wuxuu soo bandhigayaa Kaarka MicroSD ee ugu horreeya 400GB adduunka